Tag: wordpress mba | Martech Zone
Tag: wordpress Bochum
Anyị nwere plugins 47 na-arụ ọrụ na ntinye WordPress. Nke ahụ bụ ọtụtụ plugins, ọtụtụ n'ime ha nwere ike belata arụmọrụ nke WordPress. Anyị na-eme ụfọdụ nyocha ọsọ ọsọ tupu anyị ebuga plugins, ma ọ bụ anyị nwere ike iji ụfọdụ mgbagha iji meziwanye isiokwu anyị ka ọ na-agba ọsọ ọsọ ma na-anaghị atụ ụtụ na sava anyị. Ọsọ dị oke mkpa n'oge a - ma site n'akụkụ ahụmịhe onye ọrụ yana njikarịcha njin ọchụchọ.
Wenezdee, Machị 13, 2013 Tọzdee, Machị 14, 2013 John Blue
WordPress bụ otu n'ime ihe ntanetị kachasị dị na ntanetị dị ma na-abịa n'ụdị abụọ, WordPress.com na WordPress.org. Formdị mbụ, WordPress.com, bụ ọrụ azụmaahịa na-enye n'efu ịde blọgụ ngwaọrụ (iji WordPress n'ezie) na weebụ. WordPress.com na-eji ngwanrọ ahụ dị ka ihe nlereanya (aka SaS), na-echekwa ngwanrọ ngwanrọ ịde blọgụ ma na-elekọta ihe dịka nchekwa na nnyefe ọdịnaya (bandwit, nchekwa, wdg). Thedị nke abụọ, WordPress.org, bụ obodo na-enyere aka